Somaliland oo qaaday xayiraadihii Coronavirus (Covid-19) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Somaliland oo qaaday xayiraadihii Coronavirus (Covid-19)
Somaliland oo qaaday xayiraadihii Coronavirus (Covid-19)
Hargeysa (Halqaran.com) – Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqday inay qaaday dhammaan xayiraadii ay soo rogtay ee lagaga hortagayay faafitaanka Cusurka Corona Virus.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha la fasaxayay ka mid yihiin Duullimaayada, Ciyaaraha, Waxbarashada, Hotelada iyo Dhammaan waxkasta oo hore loo joojiyay.
Mr. Saylici ayaa sheegay in keliya dadweynuhu muujiyaan Taxadar dheeraad ah oo looga hortagayo faafitaanka COVID-19
axmed June 25, 2020 At 20:02
Ma markii la yiri , isku socodka Somaliya oo dhan hala isku furo, ayey qaadeen babdoodii cudurka. waa in aan loo ogolaan in ay, Gobolladaas ka soo baxaan, cudurkii ayey faafinayaan Haduu xagooga 1000 marayaa. marka hala iska celiyo, xaaraanta.